Fumana iNgakumbi malunga neentlanzi eziLwandle
Ukusuka kwiiNkqubela zeLwandle ukuya kwiiCrocole
Iqela laseReptilia liqela lezilwanyana ezibizwa ngokuba yizilwanyana ezihlambulukileyo. Lawa ahlukeneyo kwizilwanyana "ezibandayo" kunye nokuba (okanye nokuba). Ziyizilwanyana ezithintekayo, ezizibeka kwi-phylum efanayo nabantu, izinja, iikati, intlanzi kunye nezinye izilwanyana. Kukho iintlobo ezingaphezu kwama-6,000 ezidliwayo. Zifumaneka nolwandle, kwaye zibizwa ngokuba yizilwanyana zasemanzini.
I- Class Reptilia , okanye izilwanyana ezinwabuzelayo, ngokuqhelekileyo zibandakanya iqela leentlobo ezahlukeneyo: iinqanawa, iinyoka, iilzards kunye neengwenya, iilligators kunye ne-caimans.
Iingcali ezininzi zenzululwazi zikholelwa ukuba iinyoni nazo zile nkalo.
Izilwanyana kwi-Class Reptilia:
Ngaba i- ectotherms (ebizwa ngokuqhelekileyo ngokuthi "igazi elibandayo"). Ezi zilwanyana kufuneka zifudumise ngokusebenzisa ukushisa kwangaphandle (umz., Ilanga).
Ininzi ithwala incinci yabo kumaqanda, akhuselwe ngumlenze we-amniotic (ngoko iindawo ezihlaziyiweyo zibizwa ngokuba yi "amniotes").
Ziba nezikali, okanye zibe nexesha elithile kwimbali yazo yokuziphendukela kwemvelo.
Ukuphefumula usebenzisa amaphaphu kunokuba iigill. Ngaloo ndlela, izilwanyana ezinobuninzi olwandle zingakwazi ukuphefumula ukuba zihambe ngaphantsi kwamanzi, kodwa ekugqibeleni kufuneka zifike emzimbeni ukuze ziphefumule.
Yiba nentliziyo emithathu okanye emine.
Ukuhlaziya izilwanyana ezihlaziyiweyo kunye neziLwandle eziLwandle
Izilwanyana zasemanzini ziyahlula zibe ngamanqaku ambalwa:
Iingqungquthela: iiTurtles. Iinqununu zolwandle ngumzekelo weentlanzi ezihlala kwindawo yolwandle.
Squamata: Izinyoka. Iimpawu zasemanzini ziinyoka zolwandle.
I-Sauria: Iizitha. Umzekelo ngu-iguana olwandle. Kwezinye iinkqubo zokuhlelwa. izilwanyana zifakwe kwi-Order Squamata.
I-Crocodylia: iiC rocodiles . Umzekelo waselwandle ngumqorkco wamanzi anetyuwa.
Uluhlu olukhankanywe ngentla luvela kwiRejista Yehlabathi Yezilwanyana Zolwandle (WoRMS).
Izilwanyana eziphilayo zihlala kwindawo ezahlukeneyo zokuhlala.
Nangona banako ukukhula kwimimandla enzima njengentlango, abafumaneki kwiindawo ezipholileyo njenge- Antarctica , kuba kufuneka bathembele ekushiseni kwangaphandle ukufudumala.
Iinqununu zolwandle zifumaneka kwiilwandle emhlabeni jikelele. Zihlala kwiindawo eziselunxwemeni kunye nase-tropical. Ihomba le-leatherback yintlobo ekwazi ukuhamba emanzini abandayo, afana neCanada. Ezi zihlaziyi ezimangalisayo zivumelanisa ukuba ziphile emanzini amaninzi kunamanye ama-turtles, kubandakanye ukukwazi ukuxosha igazi kude neminyango yazo ukuze igcine izinga lokushisa lomzimba. Nangona kunjalo, ukuba iinqanawa zasolwandle zisemanzini abandayo kakhulu elide (njengalapho amaxhoba engahambi emzantsi ngokukhawuleza ngokwaneleyo ebusika), banokuba batshabalala.
Izinyoka zolwandle ziquka amaqela amabini: i-laticaudid yolwandle, iinkunzi ze-snakes, ezichitha ixesha elithile emhlabeni, kunye neenyoka ze-hydrophide, ezihlala ngokupheleleyo elwandle. Inyoka zolwandle zinobuhlungu obukhulu, kodwa zisoloko ziluma abantu. Bonke bahlala kwiLwandle lwasePacific (i-Indo-Pacific kunye neempuma zasePacific zasePacific).
I-iguana elwandle, ehlala kwiiGalapagos Islands, yiyo kuphela i-lizard yolwandle. Ezi zi lwanyana zihlala kummandla kwaye zixhaphaze ngokudilika emanzini ukutya i- algae .
E-US, ingwenya yaseMelika idla ngokungena emanzini amnyuwa.
Ezi zi lwanyana zifumaneka ukusuka eFlorida ukuya enyakatho eMzantsi Melika kwaye zifumaneke kwiziqithi, apho zihamba khona okanye ziqhutywe yimisebenzi yentshukumo. Ingwenya enye, ebizwa ngokuba yiCletus, yajika yaya kwi-Dry Tortugas (iikhilomitha ezingama-70 ukusuka kwi-Key West) ngo-2003. Iingwenya zaseMelika zivame ukuba zihlaziyileyo kunama-alligators aseMelika kunye neengwenya zamanzi zetyuwa, ezifumaneka kwingingqi yase-Indo-Australia ukusuka e-Asia ukuya e-Australia .
Uninzi lwezilwanyana eziziwayo zizala ngokubeka amaqanda. Ezinye iinyoka kunye nezilwanyana zingakwazi ukuzala ukuba ziphile. Ehlabathini lezityalo ezihlambulula ulwandle, ii-turtles, iguanas kunye neenkoksi zibeka amaqanda ngelixa ezininzi iinyoka zezilwandle zizala ukuba ziphile, zizalelwe phantsi kwamanzi kwaye kufuneka zidibhise ngokukhawuleza emzimbeni ukuze ziphefumule.
Iindwendwe ezinokuhlala ubuncinci inxalenye yobomi babo kwimimandla yolwandle ziquka ii-turtles , ii- crocodiles kunye nezinye izilwanyana.
Izikhokelo kunye neNkcukacha ezongezelelweyo
Galapagos Conservancy. IIguana kunye neLizards. Ifikelele ngo-Oktobha 30, 2015.
IUCN. Ngama-2010. Ifikelele ngo-Oktobha 30, 2015.
Morrissey, JF noJL Sumich. 2012. Ingqungquthela kwi-Biology yoLwandle lwaseManzini. Jones & Bartlett Learning. 466pp.
Ukulingana ngokungafaniyo, i-Piston vs isifuba - I-Basic Regulator for Beginners
Uvavanyo lweDrive: ka-2013 iGT / CS eColombia yaseFransi iFunette Mustang
Yiyiphi iThebhile yeeDayimenti zeRandom kwiStatisti?